Wac Soo -gudbinta, Sayniska Decolonise - AfricArXiv
Published by Johanssen Obanda on 3rd August 2021 3rd August 2021
Kooxda ka socota AfricArXiv waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inaan iskaashi la sameyneyno Masakhane si loo dhiso qayb isku mid ah oo luqado badan oo cilmi baaris afrikaan ah laga soo turjumay qoraalladii cilmi -baarista ee loo gudbiyey AfricArXiv. Maqaallada la soo gudbiyey, kooxaha Masakhane iyo AfricArXiv waxay dooran doonaan ilaa 180 guud ahaan si loo turjumo.
Laga soo bilaabo ogeysiiska deeqda:
'Markay timaado isgaarsiinta sayniska iyo waxbarashada, arrimaha luqaddu waa muhiim. Awoodda sayniska looga doodo afafka asaliga ah ee maxalliga ah kaliya ma caawin karto ballaarinta aqoonta kuwa aan ku hadlin Ingiriisiga ama Faransiiska sida luqadda koowaad, laakiin sidoo kale waxay dhexgalin kartaa xaqiiqooyinka iyo hababka sayniska dhaqammo lagu diidey la soo dhaafay. Markaa, kooxdu waxay dhisi doontaa qayb isbarbar -dhig ah oo cilmi -baaris Afrika ah, iyagoo u tarjumi doona waraaqaha cilmi -baarista diyaarinta Afrika ee lagu sii daayay AfricArxiv 6 luqadood oo Afrikaan ah oo kala duwan: isiZulu, Waqooyiga Sotho, Yoruba, Hausa, Luganda, Amharic. '
Read more at: www.masakhane.io/lacuna-fund/masakhane-mt-decolonise-science
Si aad u soo gudbiso qoraalkaaga (daabacaadda hore, dib -u -daabicid, ama cutubka buugga) fadlan buuxi foomka bit.ly/decol-sci
Haddii aad soo gudbineyso cusub, tilmaamaha soo socda ayaa kaa caawin doona inaad si guul leh ugu gudbiso AfricArXiv Zenodo:
Booqo zenodo.org/community/africarxiv/ oo is -qor/saxiix adiga oo isticmaalaya ORCID
Haddii aadan haysan ORCID fadlan booqo orcid.org/ si aad mid u hesho
Ku noqo zenodo.org/community/africarxiv/, guji badhanka cilladda cagaaran
Codso CC BY 4.0 liisanka maqaalkaaga
Dhamaystir habka raridda
Ku dar xiriirinta si aad u geliso on the foomka google si aad u dhammaystirto soo gudbintaada mashruuca
Haddii aad u baahan tahay caawin fadlan la xiriir submit@africarxiv.org
Soo gudbintaada dib ayaa loo eegi doonaa si loo turjumo iyadoo lagu saleynayo shuruudaha soo socda:
Mawduuca cilmi-baarista ee danta guud oo lagu dabaqi karo ardayda qalin-jabisay sannadka 1aad
Qaybinta anshaxa ee kopus -ka
Qaybinta gobolka ee qoraaga koowaad meesha iyo dhalashada
Waxaad ku soo gudbin kartaa shaqadaada Ingiriis, Faransiis, Carabi, ama Bortuqiis.
Dhammaan qoraalladii la soo gudbiyey waxaa si guud loogu wadaagi doonaa luqadda asalka ah DOI (aqoonsiga walxaha dhijitaalka ah) oo hoos imanaya shatiga CC BY 4.0. Waxaan ogeysiin doonaa qorayaasha qoraalladaas loo doortay turjumaadda.
Waa maxay qoraalka hore?
Diyaargarowga hore waa qoraal gacmeed saynis ah oo ay qorayaashu u soo galiyaan server -ka dadweynaha. Qorshaha hore wuxuu ka kooban yahay xog iyo qaabab laakiin wali ma uusan aqbalin joornaal. Akhri wax dheeraad ah
Waa maxay faa'iidooyinka la wadaaga qoraalkaaga qoraal ahaan?
Samee mudnaanta daahfurka
Maqaalku wuxuu helayaa DOI si uu u noqdo mid la tixgeliyo
Maqaalka waxaa lagu shatin doonaa hoosta Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) liisanka
Kor u qaad astaantaada cilmi -baare Afrikaan ah iyo tan hay'adda aad martida u tahay
Miyaan wali ku daabici karaa maqaalladayda joornaal ka dib markii aan u daabacay sidii qoritaan hore?
Haa. Ka dib markaad u soo gudbiso daabacaaddaada AfrikaArXiv keydka Helitaanka Furan ee aad dooratay, waa tan waxa aad sameyn karto si aad u go'aamiso joornaalka Helitaanka Furan si aad ugu gudbiso qoraalkaaga. Tag Thinkchecksubmit.org oo raac sanduuqyada. Intaa waxaa dheer, waxaad isticmaali kartaa Matcher Journal furan iyo Buugga Tilmaamaha Xirmooyinka Furan si aad go'aan uga gaarto joornaal ku habboon qoraalkaaga.
Categories:	ogeysiisyadaKala Duwanaanta Luqadda
Tags: Sayniska DecoloniseLacuna LacunaMasakhaneTarjun Saynistarjumaada
Luqadaha Afrika si ay u helaan ereyo saynis oo aad u badan - Barashada Mashiinka	· 18th Ogosto 2021 markay tahay 8:17 pm
[…] Luqadaha waxaa si wadajir ah ugu hadla ku dhawaad ​​98 milyan oo qof. Horaantii bishaan, AfricArXiv waxay ku baaqday soo gudbinta qorayaasha danaynaya in warqaddooda loo tixgeliyo turjumaad. Waqtiga kama dambaysta ah waa 20 […]
Log in si Reply
Luqadaha Afrika si ay u helaan ereyo cilmiyeed oo aad u badan | Warka Maanta	· 18th Ogosto 2021 markay tahay 10:08 pm
[…] Luuqadaha ayaa si wada jir ah ugu hadla afka 98 milyan oo qof. Horaantii bishaan, AfricArXiv waxay ku baaqday in soo gudbinta qorayaasha ay ka soo horjeestaan ​​qaadista warqadahooda si ula kac ah loogu turjumo. Waqtiga kama dambaysta ah waa 20 […]
Afrikaanku wuxuu ku shubtaa obtenir iyo de termes cilmiga sayfiyo sur mesure -Ecologie, science - ecomag	· 18th Ogosto 2021 markay tahay 11:11 pm
[…] Sont parlées collectivement par around 98 million de personnes. Waxaa intaa dheer tôt ce mois-ci, AfricanArXiv appel à soumissions d'auteurs intéressés à ce que leurs articles soient pris en compte pour la traduction. La […]
Luqadaha Afrika si ay u helaan ereyo saynis oo aad u badan - Techbyn	19-ka Ogast 2021 markay tahay 12:13 subaxnimo
Luqadaha Afrikaanka si ay u helaan ereyo cilmiyeed oo aad u badan - Luuqadaha Nova	· 19th Ogosto 2021 markay tahay 12:31 pm